Iindlela ezili-11 zekhadi lokushishina ukukhuthaza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 05/09/2021 17:02 | Ukuhlaziywa ukuba 05/09/2021 17:06 | Ezahlukeneyo
Un ukuhanjiswa kwekhadi leshishini licebo lokulinganisa uyilo olwenzileyo "kubomi bokwenyani." Njengoko ziifotomontages, oku kubonisa ukujonga kwangaphambili, nangona kunjalo ngendlela ebonakalayo, yendlela oza kusetyenziswa ngayo umsebenzi wakho kwiifomathi ezahlukeneyo.
Kwi-Intanethi sinokufumana amawaka eetemplate zamakhadi oshishino kodwa besifuna ukwenza yonke into ibelula kwaye sicinge ngokuqulunqa ukhetho kuzo ukuze ungazikhangeli. Into elungileyo kukuba bonke bakhululekile, ke awuzukuchitha euro. Kwaye nokuba unokhetho oluninzi, ungayibona uyilo lwakho kwiifomathi ezahlukeneyo kunye nemifanekiso eya kukunceda wenze umbono olungileyo wokuba sisiphumo osilindeleyo na okanye kufuneka uguqule into kuyo.
1 Ezi zezona zilungileyo zamakhadi oshishino
1.1 Ukugqitywa kwekhadi leshishini elipheleleyo
1.2 Ukuhanjiswa okuhle
1.3 Ikhonkco leshishini lekhonkco
1.4 Amakhadi oshishino kwimpahla yokunxiba
1.5 Ukuhanjiswa kwekhadi
1.6 Uyilo lwala maxesha kunye nelihle kule mockup yekhadi leshishini
1.7 Uyilo lwegraphic
1.8 Ukufakwa kwekhadi leshishini lomxhuzulane
1.9 Amakhadi oshishino emida
1.10 Ubume obume nkqo kwikhadi lokushishina
1.11 Amakhadi oshishino ngokwembono
Ezi zezona zilungileyo zamakhadi oshishino
Kuba sifuna ukugxila ekunikezeleni ukhetho oluninzi lwekhadi leshishini, masiqonde ngqo kwinqanaba. Ke ungathini malunga nokujonga kwezi sizikhethileyo?
Ukugqitywa kwekhadi leshishini elipheleleyo
Xa ubonisa uyilo lwekhadi leshishini, Kwiimeko ezininzi unemifanekiso emibini, omnye ongaphambili kwaye, ukuba kunokwenzeka, lowo ungasemva. Kwaye kwimeko ezininzi licala elinye kuphela elishicilelweyo; kodwa eneneni zombini zinokuyilwa.
Ke ngoko, ngalo mzekeliso wokukhuphela uya kuba nakho ukubanombono wazo zombini, zibekwe ecaleni kwenye, ukuze ibonwe ngokwembono.
Ukubonisa ngasemva nangaphambili, sinomnye umzekelo onokuwusebenzisa. Kulula kakhulu ukusebenza nayo kwaye inyani yile, inyani yokuba amakhadi avela enqunyanyisiwe, inika u "Andazi ukuba yintoni" eyenza ukuba umfanekiso ubenomtsalane.
Njengoko ubona, icandelo ngalinye lekhadi liphindaphindwe inani elifanayo lamaxesha, kwaye unganika ukubalasela ngakumbi ngasemva okanye ngaphambili.
Ikhonkco leshishini lekhonkco
Njani malunga nokuxutywa kwekhadi leshishini kwikona yodonga? Yikholwe okanye ungakholelwa, inokubonakala kakuhle, kuba iya kwahluka ngemibala yomgangatho kunye neendonga. Ngapha koko, kule meko zonke ezi zinto zinokwahluka ngombala, ezenza ukuba zisebenze ngakumbi kwaye ungazisebenzisa kwakhona nanini na ufuna.
Unayo yokukhuphela apha.
Amakhadi oshishino kwimpahla yokunxiba
Khawufane ucinge umtya wempahla oneebhanti zempahla ezenziwe ngomthi. Eyona nto iqhelekileyo kukuba ucinga ngempahla hayi ngamakhadi oshishino ukuxhoma kwezi kliphu, kodwa kule meko ungabeka amakhadi eshishini, ngaphambili nangasemva (okanye ukuba awunangasemva, ngaphambili ngaphambili ukubenza babonakale ngcono).
Kule meko asizukukunika nje ifoto onokuthi uyenze ngokwezifiso zoyilo lwakho, kodwa ipakethe ye-8 oko kukuthi ukhuphele kwaye iya kukunika umbono ovela kwii-engile ezahlukeneyo zamakhadi, zombini ngaphambili nangasemva.
Uyilo lwala maxesha kunye nelihle kule mockup yekhadi leshishini
Kule meko, le mockup yekhadi leshishini isisiseko. Inemvelaphi engwevu apho, embindini womfanekiso, ibhloko ye amakhadi angaphambili kwindawo emhlophe nasemva lowo unikwa ukubalasela ngakumbi. Okanye mhlawumbi le yindlela ekufanele ukuba ibe yiyo, unganikezeli ngedatha "kuqala" kodwa uyenze uyilo olothusayo lukujonge ukuba yintoni kwaye, ngasemva, unedatha.
Ukuqwalaselwa kugxilwe kakhulu kwabo bayili bemizobo, kodwa nakubo bonke abo basebenza nekhompyuter (abahleli, abaguquleli, njl. Isekwe ekubekeni ikhadi kwikhibhodi yelaptop ukubona ukuba ijongeka kanjani.
Ukufakwa kwekhadi leshishini lomxhuzulane
Khawufane ucinge ukuba unemfumba yamakhadi oshishino kwaye uwaphosa emoyeni. Okwalo mzuzu, uthatha ifoto. Ewe, kuba asifuni ukuba uyenze kubomi bokwenyani, ngakumbi kuba kuya kufuneka uziqokelele zonke, uneli khadi lokushishina apho zombini umphambili kunye nomva wamakhadi ziya kubonakala.
Amakhadi oshishino emida
Ngaba uza kwenza ikhadi leshishini elinomda? Ngokwesiqhelo kuphela xa unezininzi zazo uzibona ezo mphetho, ngaphandle kokuba uziprinte ziyatyeba kwaye loo nto yenza ukuba ibonakale ngakumbi. Kodwa ngamanye amaxesha ukubona ngendlela eza kujongeka ngayo yingxaki. Ngaphandle kokuba ufumane le mockup.
Ngayo unokubeka ikhadi lakho kodwa tshintsha umbala wemida ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona nto unokukhetha kuyo.
Ubume obume nkqo kwikhadi lokushishina
Ukuba uza kuguqula ulandelelwano lwekhadi lakho kwaye ufuna ukulibonisa ngokuthe nkqo ngokuthe nkqo ngokuthe tyaba, eli khadi lokushishina linokukunceda ufumane umbono wendlela ebiya kujongeka ngayo. Into ekufuneka uyenzile kukubeka umphambili kunye nomva wakho kwaye ubone ukuba uza kujongeka njani.
Ungayitshintsha ngokulula imvelaphi, ke uya kufumana umbono wokuba yile nto ubuyikhangela okanye kukho into ekufuneka uyichukumisile.
Amakhadi oshishino ngokwembono
Olunye uhlobo lokufuna ubukhazikhazi kunye nokubonisa nje ikhadi yile. Kunye Imvelaphi entle emnyama, unomboniso wekhadi, ngaphambili nangasemva.
Injongo kukubeka phambili oko kubonwayo, kwaye kubonakala ngathi akunanto kodwa enyanisweni ungabuya umva ukuze, endaweni yokujonga ngasekhohlo, bayenze ngasekunene.
Njengoko ubona, zininzi iindlela zokukhetha amakhadi eshishini onokuzama, kunye nezinye ezininzi ezikwi-Intanethi ezilinde ukufunyanwa. Ke ukuba awuqinisekanga ngayo nayiphi na kuzo, zama ukwenza uphando ukuze ufumane olona lubonisa uyilo lwakho. Oku kuyakwenza ukuba abathengi bajonge ngakumbi "ngokwenyani" kwaye kuthintele ukusebenza kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iindlela ezili-11 zekhadi lokushishina ukuze likukhuthaze